Laacib hore ee kooxda Liverpool ah oo codsaday in la go’aamiyo mustaqbalka Sadio Mané – Gool FM
(Liverpool) 24 Abril 2020. Halyeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Stephen Warnock ayaa ka codsaday maamulka Reds inay go’aamiyaan mustaqbalka laacibka reer Senegal ee Sadio Mané, xilliyada soo socda.
Heshiiska Sadio Mané ee kooxda Liverpool ayaa wuxuu dhacayaa xagaaga 2023, laakiin wuxuu soo jiitay dareenka macallinka reer France ee Zain Zidane, kaddib bandhigiisii fiicnaa Reds ee xilli ciyaareedkan.
Stephen Warnock ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sport” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Waa muhiim in Liverpool ay isku daydo inay la xiriirto Sadio Mané, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad ilaashato hantidaada ugu fiican kooxda, si ay gacan kaga geystaan ​​keenista ciyaartoy kale oo sarsare”.
“Ciyaartoydan waxay doonayaan inay la ciyaaraan kuwa ugu fiican, aragtideyda Sadio Mané, wuxuu halkan ku heystaa tababare jecel isaga, iyo kuwo jecel ee la dhacsan isaga, wuxuuna garanayaa habka uu ku ciyaaro”.
“Ha iloobin qaabkii ay Liverpool u horumartay afartii ama shantii sano ee la soo dhaafay iyadoo uu hoggaaminayey Jürgen Klopp, labadii sano ee la soo dhaafay, waxaay ku soo baxeen kooxda ugu fiican haatan, waxaana la dhihi karaa Mané waa dahabka Reds”.
“Waan hubaa in haddii uu albaabka soo garaaco isla markaana uu codsado qandaraas cusub, in sidoo kale lagu abaal-marin doono, haddii ay Liverpool ka faa iideysan laheyd Sadio, marka waxaa laga yabaa in la gaaray waqtigii sidaas la sameyn lahaa”.
“Laakiin marka loo fiiriyo Reds, kaliya waxay doonayaan inay qandaraaska u kordhiyaan, sababtoo ah badelka Sadio Mané ayaa wuxuu ku kici karaa qiimo aad u sarreeya ee aan la hubin”.